DIGAAGGA KOKHINKHIN: SAWIRRADA, SIFOOYINKA JILICSAN, WAA MAXAY MIISAANKA LOO YAQAAN 'CHICK A MONTH' IYO WAXA LA YAQAAN EE KU SAABSAN BARBAARINTA? - BEERAHA DIGAAGA
Maxay digaagga Kochinquin u egyihiin sawirka iyo maxay yihiin waxyaabaha gaarka ah ee shimbiraha taranka ee noocaan ah?
Caanaha Kokhinhin hore looguma aqoonsan Ruushka, si kastaba ha ahaatee, waxay dhowaan heshay caan. Cochinquins waxaa lagu koray ujeedooyin qurxin iyo waliba hilib aad u dhadhan fiican leh. Dalka hooyo waa Shiinaha. Beeralayda digaaga waxay jecel yihiin noocyada noocyada digaagga oo soo jiidanaya astaamaha dabiiciga ah: dulqaad, awoodda ay u kacaan xataa xataa cimilada qabow.
Iskutallaabtan waxaa lagu gartaa ugu horreyn marka la eego xajmiga shimbirta. Noocaan digaagga ah ayaa leh dib u laabasho iyo xabadka, oo leh muruqyo aad u horumarsan. Cajiib ah ayaa loo arkaa marka la mariyo garbaha qoorta. Qoorta waa gaaban yahay. Madaxa waa yar yahay. Googo yar yar, jaalle ah. Madaxa waxaa lagu qurxiyey shanlo yar. Indhuhu waxay leeyihiin midab guduudan.
Shakaalka waxay leeyihiin xaraar aad u qurux badan oo dhalaalaya. Laga soo bilaabo daboolka waxa suuragal ah in la jeexo muuqaal. Digaagga waxay leeyihiin qoorta gaaban marka loo eego qulqulka. Way yar yihiin. Lugaha waa mid gaaban, laakiin aad u xoog badan. Shinnigu waa musiibo, si fiican ayaa loo horumariyaa. Feet ayaa daboolay baaldi gebi ahaanba. Baalalku waa mid dhexdhexaad ah. Talooyinkooda waxay ku yaalliin hoosta moolka.
Si loola socdo dheelitirka, jirka ayaa horay usocda. Laga soo bilaabo dhinaca waxay u muuqataa in digaaggu aad u ballaaran yahay oo dusha sare leh. Breed kohinhin waa hilib. Digaagga ayaa gaaraya miisaanka ilaa 4 kg, qoob-ka-dhaqaajinta ilaa 5 kg.
Dabcan, wax soo saarka ukunku wuu hooseeyaa: 100-110 ukumaha sanadkiiba wuxuu heli doonaa sayid ka mid ah hen. Miisaanka cunnada 50-60 garaam. Ku dhuujin midab jaalle ah oo jaale ah. Cinjirku waa orange quruxsan. Iskutallaabtu waa mid u adkaysata xaaladaha cimilada dibadda, gaar ahaan qabow. Beeraleydu waxay ogaadeen in heerkulka hooseeyo wax soo saarka ukunta waxoogaa kor u kacay.
Guud ahaan, digaagga waxay leeyihiin dabeecad aad u degan, Uma baahnid meelo badan oo socod ah, si sahlan ayaa ugu noolaan kara baqashada. Diyaarinta sarreeya sidoo kale looma baahna.
DAREEN! Tilmaamaha digaagga iskutallaabtan ayaa ah inay qaawan yihiin. Markaas xajistooda ayaa aad u gaabis ah. Taasi waa sababta ay u baahan yihiin in lagu koro meel diiran.
Maxay tahay miisaanka qiyaasaha todobaadlaha iyo bilaha ah?
Dhalashada digaag, miisaankeed, sida caadiga ah, waa qiyaastii 35 g. Iyadoo daryeel wanaagsan iyo nafaqo leh, toddobaadkii ka dib digaaggu wuxuu heli karaa ilaa 200 g oo miisaankeedu yahay. Maxay tahay miisaanka qiyaasaha billaha ah? Da'daas, waxay gaari karaan 800 ilaa 1000
Oo sidaas daraaddeed fiiri sawirrada digaagga ee this.
Ka dib marka la qaboojiyo, chicks ayaa ku haray wakhti lakab ama lakabiye. Waxay ku xiran tahay nooca wax soo saarka. Waxay u baahan yihiin inay qalalaan. Ka dib markaa waxaa loo wareejin karaa meel kale oo diiran leh qashin (warqad, dhar).
Xusuuso! Saacadaha ugu horreeya ee nolosha, iyo sidoo kale maalinta xigta, waxaa muhiim ah in aan la qabsan cagaha qabow ee carruurta.
Si ka duwan dadka qaangaarka ah, kuwaas oo gabi ahaanba aan qabin xaaladaha xabsiga, guurka ayaa u baahan fiiro badan. Marka la eego maqnaansho la'aanta, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo heerkulka diiran. Usbuuca ugu horreeya ee nolosha waxaad u baahan tahay inaad bixiso laga bilaabo +30 to + 32 ° C.
Markaa waxaad yareyn kartaa heerkulka ilaa +20 ° C Si loo ilaaliyo heerkulka, dabka iyo nalalka laydhka ayaa inta badan loo isticmaalaa. Maalinta ugu horreysa ka dib marka la qaboojiyo, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo iftiinka iftiinka 24 saacadood. Maalmaha soo socda, maalinta iftiinka waa in la dhimo ilaa 1 saac. Sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad sii waddo ilaa illaa maalintii iftiinka uu gaaro 17 saacadood.
Chicks u baahan tahay in lagu hayaa baqashada nadiif ah. Waa lagama maarmaan in la bixiyo hawada. Hawada cusub ayaa aad u faa'iido leh sambabaha jilicsan. Nestlings, si ka duwan sida dadka qaangaarka ah, waxay u baahan yihiin meel bannaan. Waxay u baahanyihiin in ay ordaan iyo kuwa kaleba. Waxay jecel yihiin in ay cawska ku daadiyaan, ay ka soo baxaan, raadso wax dhadhan fiican leh. Si kastaba ha noqotee, haddii xaaladan aan la dabooli karin, ma ahan caqabad weyn oo ku aaddan horumarintooda.
Kafaarada waa in lagu qalabeeyaa dayrarka dheeraadka ah si aan loo helin aalado yar. Dumarka qaangaarka ahi kama gudbi doonaan shabakada netka, iyo dhirta si sahal ah ayay u qabanayaan. Intaa waxaa dheer, haddii bisadaha, eeyooyinka iyo xayawaanka kale ee ku dhici kara xayawaanka yaryar ee ku dhow dhow, waxaad u baahan doontaa inaad u qalanto difaacyo dheeraad ah.
Quudinta iyo waraabinta
Haddii cunnooyinka digaagga si sax ah loo doorto, markaa hubaal waxaad ku heli doontaa natiijada la rabo - miisaankii dhaqso degdeg ah. Maalmaha ugu horreeya waxaa lagama maarmaan ah in ay bixiyaan digaag yar oo ah hilibka qamadiga ah, hadhuudh, masago, iyo ukunta. Waxaad ku dari kartaa cuntooyinka ma aha jinsi badan. Haddii aad ku siiso miro, sarreen, shaciir, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ka saarto filimka iyo jarjar.
Waa muhiim! Filimada qashinka hadhuudhka ah looma dhadhamin. Maalinta saddexaad waxaa muhiim ah in lagu daro cagaarka cuntada si ay ugu qiyaasaan 6 g halkii digaag. Waxay noqon kartaa alfalfa, nettle, caleemaha løndelion.
Maalinta shanaad, waxaad bixin kartaa karootada heerka 5 g halkii qofba. Waxa kale oo loo baahan yahay in si fudud loo daadiyo. Waxaad horey u siin kartaa burka dhirta. Maalinta tobnaad waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo mugga hadhuudhka. Waxaa horeba suurtagal ah in ay bixiyaan qashinka kalluunka, fowdada, qolofka la jajabiyay ee heerka 5 g mid kasta.
Si tartiib ah u soo qaado shaxdan ilaa 10 g. 17 boqolkiiba cuntada quudka ah waa inay ahaato cake iyo cunto. Waxay ka kooban yihiin borotiinka asalka dhirta. Laga bilaabo maalinta labaatanaad, waxaad bedeli kartaa qaybta shanaad ee hadhuudhka leh barandho la kariyey. Marka la eego qaybta da'da, waa inaad u hoggaansantaa tirada quudinta.
Sidaas, toddobaadkii ugu horreeyay ee nolosha, digaagga waa in la quudiyo ilaa 8 jeer. Marka labaad - 6 jeer. Saddex jeer afartan jeer. Laga bilaabo bilaha labaad ee quudinta, waa in la labanlaabaa - subaxda iyo fiidkii. Mugga caanaha waa in uu ahaado boqolkiiba 60 wadarta guud ee quudinta.
Kani waa hilibka hilibka ee digaagga, sidaa daraadeed waa mid aad muhiim u ah in lagu daro cuntooyinka dhallinyarada ilaa 16 toddobaad. Jajabiyaha waa inay noqdaan kuwo raaxo leh, dhinacyada yaryar si ay feedhku u heli karaan cunto.
Talo: Ha ku shubin raashin badan, markasta waa la jeexi doonaa ama waa la burburin doonaa dhulka. Way ka fiicantahay inaad sugto ilaa ay cunaan, ka dibna ku dar intaa ka badan.
Sida biyaha, marka wax walba waa sahlan tahay. Biyo cusub ayaa loo baahan yahay, ma ka sareeyo 30 ° C. Mid ka mid ah cabbitaanada fuuqbaxa ayaa ku filan 50 shil. Waxaa muhiim ah in cabitaanka khamriga la dhigo meel la gaari karo. Qaar ka mid ah biyaha ayaa lagu beddeli karaa caanaha cusub. Waa mid aad ufiican. Badanaa waxaa jira xaalado ay tuugo ka mid ah ay bilaabaan in ay ka danbeeyaan asxaabtooda. Yar yari, cun cun xun.
Xaaladahan, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u siiso iyaga: ha ku kala soocaan unug gaar ah, ama si joogto ah u quudiya iyo dhuunta naftaada. Waxay u baahan yihiin inay siiyaan caanaha la jarjaray ukunta la kariyey. Isku-dhafka borotiinkan waa mid aad u wanaagsan. Tababbarradu waxay muujineysaa in inta badan laaluushka lagula socdo daryeelka dheeraadka ah uu si degdeg ah u kobcayo oo kor ugu qaadayo horumarka inta kale.
Biyaha nadiifta ah iyo cuntadu waxay muhiim u yihiin digaagga. Quudinta iyo cabitaanada waa in si fiican loo dhaqo maalin kasta. Waxaa lagu shaqeyn karaa 5% xalal ah qaabab.
Baahida quudinta ee shalay ayaa loo baahan yahay in la baabi'iyo si looga fogaado suuska, sidaas darteed dhalmo cuduro kala duwan.
Tirakoobka ayaa muujinaya in oo leh daryeel caadi ah, heerka reritaanka ee chicks waa mid aad u sarreeya wuxuuna gaaraa 90 ilaa 95 boqolkiiba. Marka la eego in dheef-shiid kiimikaad ee Cochinha hoos u riixay (sida dhammaan iskutallaabta jilicsanaanta hilibka), waxaa muhiim ah in guurka aanad cunnayn.
Waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo hababka cuntada ee cayilan ee cayilan ee mustaqbalka aan laga fogeyn. Haddii aad ogaato in chicks ay bilaabeen baalaato degdeg ah, hubi inaad gasho bocorka iyo kaabajka cuntada. Waxay caawin doonaan daloolka, iyo bocorku wuxuu u oggolaan doonaa inuu ka gudbo dirxiga. Waxa kale oo aad ku dari kartaa jeexa shoolada 1 jeer toddobaadkii oo ah heerka 2 g oo digaag ah. Kala-hadal wanaagsan iyo immunostimulating wakiil waa xal of potassium permanganate. Waa in la siiyaa ilaa saddex jeer toddobaadkii.
Dareen u yeelo! Waa muhiim inaad sameyso xal cusub mar kasta. Haddii ay suurtogal tahay, laga bilaabo maalinta shanaad ee nolosha, waxaad ku dari kartaa fitamiinada cuntada 'shimbiraha'. Fiitamiin aad u faa'iido leh A, E, D.
Waxaad sidoo kale diyaarin kartaa isku dar ah isku dhafka shimbiraha sii kordhaya.
0.5 litir oo saliid ah gabbaldayaha;
2 tsp. fitamiin D2; - 2 tsp. fitamiin E;
2 tsp. fitamiin A.
Dhamaantood isku dhafan U hubso inaad sii haysatid qiyaasta soo go'day qaboojiyaha. Fiitamiinada waxaa laga iibsan karaa farmasiga qaabka saliidaha. 1 kg oo feed ah ayaa qaadata 1 tsp. saliidda keentay. Wixii kobcinta wax ku oolka ah Cochin waxay iyaga ku quudin kartaa raashin warshadeed. Waxay si fiican isu dheelitiraan oo si dhaqso ah u siiyaan natiijada la rabay. Kuwaani waxay ku jiraan dhammaan fiitamiinada iyo borotiinada lagama maarmaanka u ah jidhka hilibka lo'da ee digaagga.
Akhristaha waxaa laga yaabaa inuu xiiso u leeyahay maqaallada ku saabsan noocyada digaagga Cochin buluug iyo madow, iyo sidoo kale farqiga u dhexeeya taranka Brahma iyo Cochin.
Xayawaanka da'da caafimaadka leh waa fure u ah koritaanka digaagga qaangaarka ah. Sidaa darteed, waxay muhiim u tahay maalmaha ugu horreeya ee nolosha si ay u bixiyaan daryeel wanaagsan, nidaam la aasaasay iyo cunto dheellitiran. Cuntadaada ma sii wadan kartid waqti ka hor. Waxaan u baahannahay inaan sugno marxaladda lagama maarmaanka u ah horumarinta mareenka caloosha iyo mindhicirka ee digaagga.
Waxaa lagama maarmaan ah in la waafajiyo xadiga cuntada la aasaasay, taniyo Cochin waxay u muuqataa inay noqoto mid cayilan, waxaana u baahanahay hilib tayo sare leh. Tani waa shimbiraha aan la midka ahayn marka la barbardhigo isgoysyada kale ee badan, sidaa daraadeed xoogaa dadaal iyo kalsooni iyo waxaad awoodi doontaa inaad gaarto natiijada la rabay.